गजलको नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौ : केसी
क्यानाडामा बस्दै आउनुभएका गजलकार ध्रुव केसीको नया गजल एल्बम समय आए पछि सार्वजनिक भएको छ । ८ वटा गजल संग्रहित एल्बममा संगीत इश्वर खत्रीले भरेका छन् । प्रवासमा रहेर पनि गजल एल्बम प्रकाशित गर्नुभएका गजलकार केसीसँगको कुराकानी ।
ध्रुव केसी ‘गुमनाम’
तपाईं आफुलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
हेर्नुस् म लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्र काम गर्दै आएको ब्यक्ति हुँ । करीब दस बर्ष नेपालमा शिक्षण् गरेर हाल बिदेशमा पनि यही पेशा लाई अगाडि बढाएको छु । साथसाथै लेखन लाई पनि निरन्तरता दिइरहेकोे छु। त्यसैले म आफुलाई गीत संगीत र साहित्य लाई माया गर्ने ब्यक्ति को रुपमा चिनाउन चाहन्छु न कि बिशुद्ध सर्जक वा साहित्यकार ।
गजलको क्षेत्रमा अकस्मात आउनुभयो गजल लेख्न चाहीँ कहिले देखि थाल्नु भयो ?
अहिले हेर्दा अकस्मात जस्तो लागे पनि मैले धेरै अगाडि देखी गजल लेख्न सुरु गरेको हुँं । २०५६–५७ साल तिर नै मैले गजलहरु लेख्थे । ती गजलहरु रेडियो र पत्रीका हरुमा प्रसारण प्रकाशन हुन्थे । भर्खर पोखरामा एफ एम स्थापना भएको त्यो समयमा मैले रेडियो अन्नपूर्ण को खुला आकाश जस्ता कार्यक्रममा गजल बाचन गरेर प्रथम भएको पनि मलाई याद छ । त्यस्तै २०६२ सालमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयमा भएको प्रतियोगिता मा भाग लिएर द्धितिय पुरस्कार जितेको थिएँ । तर म बढी जसो सार्वजनिक कार्यक्रम हरुमा उपस्थित नहुने र पब्लिसिटी तिर नलाग्ने भएकोले नै अहिले आकस्मात देखा परेको जस्तो लाग्न सक्छ ।
नाममा गुमनाम कसरी जोडीएर आयो ?
२०५९–६२ साल म किर्तिपुरमा बस्दा धेरै गजल हरु लेखँे । विश्वबिद्यालयको पढाई सकेपछी म पी एन क्याम्पसमा शिक्षण गर्न लागेँ । त्यसपछि मलाई कार्यक्रम हरुमा भाग लिन र सार्वजनिक रुपमा गजल लेख्न पूर्णरूपमा रोकिए जस्तो भयो । तर धेरै समय सम्म मैले आफुलाई नलेखी बस्न सकिन र ‘गुमनाम गजलकार’ भन्ने नाम मा लेख्न सुरु गरँे । एउटा ठुलो गजल सर्कल ले मलाई यहि नाम बाट नै चिन्छन । तर अब आएर सधैं लुकेर बस्नुहुन्न भन्ने लाग्यो साथै साथीभाइ हरुको पनि आग्रह रह्यो । त्यसैले अहिले आएर ध्रुब के सि र ‘गुमनाम गजल्कार’ लाई जोड्ने कोशीस गर्दैछु ।
गजल के को लागि लेख्नुहुन्छ ?
लेखन सर्जकको ब्यक्तिगत भावनाका पोखाइ मात्र नभएर उस्ले जीवन जगत लाई कसरी बुझेको छ । अरु मनिसहरुले यसलाई कसरी बुझुन भन्ने चाहन्छ जस्ता कुराहरुको अभिब्यक्ती पनि हो। मेरो गजल लेखन पनि यहि सेरोफेरोमा घुम्छ । आफ्नो आत्मसन्तुष्टीको पाटो त छँदैछ । मैले आफ्ना खुशी, पिडा र भोगाइ हरुलाई पोख्ने एक माध्यमको रुपमा पनि गजललाई बनाएको छु । नेपाली साहित्यमा गजल लेखन नयाँ विधा हो । यहि नयाँ क्षेत्रमा लेखन गर्दा अलिकती महत्व राख्ला कि भनेर पनि हो ।
गजल एल्बममा कति र कस्ता गजलहरु समाबेश गर्नुभएको छ ?
एल्बममा ८ वटा गजलहरु संग्रह गरिएको छ । उक्त एल्बममा नेपालका चर्चित गायक गायिकाहरु प्रमोद खरेल, शिव पारीयार, अन्जु पन्त, स्वरूपराज आचार्य, सत्यराज आचार्य, राज सिग्देल, बानिक प्रधान, सुजता बर्मा र ईश्वर खत्रीले आवाज दिएका छन । प्रमोद खरेल ले गाएको गीत को भिडियो पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । यो अत्यन्तै चर्चित भएको छ । यसमा प्रेम, बियोग, आशा र जीवन दर्शन सम्बन्धी भाव पोखिएका गजलहरु छन । यो एल्बममा हामीले केही नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौ । त्यसलाई धेरैले मन पराइदिनु भएको छ ।
कस्तो नयाँ प्रयोग ?
हामीले गजल भन्ने बित्तिकै क्लासिकल शास्त्रीय संगीत प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मन्यता लाई तोडेका छौँ । नेपाली बाजाहरु साथै पश्चिमी बाजा हरुको प्रयोग गरेका छौ । र यसको लागी संगीतकार इश्वर खत्री र संगीत संयोजक किरण कंडेलले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ । हरेक गीत गजल स्थायीमा पुगेर अन्त्य गर्ने चलन लाई पनि तोडेका छाँै । यस बाहेक हामीले यो एल्बममा गजल को बिच बिचमा वाचनको प्रयोग गरेका छौ । जुन नेपाली गजल गायनमा नयाँ प्रयोग हो ।
प्रबास को ब्यस्तता बिच गजल एल्वम निकाल्ने तार्तम्य कसरी मिल्यो त ?
यसको श्रेय भने क्यानाडामा म सँगै बस्नुहुने संगीतकार मित्र ईश्वर खत्री लाई जान्छ । उहाँले मेरो गजलहरु हेरेर मन पराउनुभयो । एउटा एल्बम निकालौ भन्ने प्रस्ताब गर्नुभयो । करीब एक बर्ष को अथक मिहेनत स्वरूप यो गजल एल्बम तयार भएको छ । यो इश्वर जीको तेस्रो एल्बम हो र यो एल्बममा उहाँले आफ्नो अनुभवलाई निखारेर प्रस्फुटित गर्नुभको छ । जुन कुरा तपाईंलाई हाम्रा गजलहरु सुनेपछी थाहा हुन्छ ।